डेडको हाईस्कूल - सीजन २ अफवाहहरू + विचारहरू - पालना दृश्य
by Dima XNUM Xth 18 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड डेडको हाईस्कूलमा - सीजन २ अफवाहहरू + विचारहरू
डेडको हाईस्कूल निस्सन्देह मैले गत बर्षमा हेरेको भन्दा बढी अविस्मरणीय एनिमेज मध्ये एक हो, र अन्त्य अन्तिम निर्णायक थिएन, यो कि चट्टान ह्या ha्गरको धेरैमा छोडियो जस्तो देखिदैन। यो एक तरीकाले हाम्रो कल्पनामा छोडियो जुन अन्तमा हाम्रो पात्रहरूमा खुशी हुन्छ। यो कहिले पनि स्पष्ट गरिएको थिएन कि जापानलाई प्रभाव पार्ने महामारी संसारको बाँकी भागमा फैलिएको हो। मलाई लाग्थ्यो कि हाईस्कूल अफ द डेडको कथाले यसको कथा जारी राख्दछ जस्तो मैले सोचेँ कि सामान्य कथा मेरो विचारमा धेरै आशावादी थियो। म यस ब्लगमा "HOTD" को रूपमा "डेडको हाईस्कूल" लाई उल्लेख गर्दैछु त्यसैले सचेत रहनुहोस्।
"डेडको हाईस्कूल" बाट लिइएको (जेनोन विश्वव्यापी मनोरन्जन)
HOTD को सामान्य कथा मलाई धेरै आकर्षक थियो, र यद्यपि मैले धेरै "जोम्बी" प्रकारका चलचित्रहरू र टिभी श्रृ seen्खलाहरू देखेको छु तर मलाई लाग्दैन कि HOTD धेरै चाखलाग्दो र मौलिक हुनेछ। यद्यपि, म धेरै गलत थिएँ र मैले यो पाएँ कि मेरो आँखाले यसलाई हेर्दा स्क्रिन कहिल्यै छाड्दैन। पात्रहरू त्यति रोचक र मौलिक थिएनन त्यसैले कुरा गरिरहेको थियो, तर यसको कथा र ग्राफिक प्रकृति थियो जसले मलाई हेरिरह्यो। सम्पूर्ण कथाको यथार्थपरित अनुभूति हुन्छ जबकि यसको यौन र हास्य पक्षबाट पनि भड्किएको हुँदैन। मलाई यसको बारेमा साँच्चिकै मनपर्‍यो र यदि तपाईंले पहिल्यै हेरिसक्नुभएको छैन भने म तपाईंलाई सुझाव दिन्छु कि यो गर्नुहोस्।
यद्यपि मलाई थाहा छ कि यस प्रकारको कथा दोहोरिएको छ र दोहोरिएको छ, तर मैले तथ्य पाएँ कि सबै मुख्य पात्रहरू उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू थिए जसले यसलाई फरक धार दिएका थिए, किनकि हामीले उनीहरूको परिप्रेक्ष्यमा एक जम्ब्बी एपोकलिसलाई भेट्यौं, जुन कुरा म हो। कहिल्यै देखेका थिएनन्।
मलाई लाग्छ कि यदि HOTD को सम्पूर्ण संरचना पुनर्निर्माण गरियो र यसको सट्टा पहिलो सीजनमा १२ को सट्टा २ 25 एपिसोडहरू सम्मिलित भएको थियो भने यो कहानी फैलिन सकिन्थ्यो र यो मेरो विचारमा राम्रो हुने थियो। पात्रहरू परिचय दिन अझ बढी समय भएको थियो, र त्यहाँ अर्को समयको लागि चट्टान ह्याn्गरको निर्माण गर्न, वा कथालाई अधिक निर्णायक अन्तको साथ पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न अधिक समय हुने थियो। यद्यपि यो हामीले प्राप्त गरेको होईन, र हामीले केवल १२ एपिसोडहरू पाएका छौं, यद्यपि कहानी ती १२ एपिसोडहरूमा देखाइएको थियो, यो उनीहरूले भन्न खोजेको कथाको लागि पर्याप्त समय जस्तो देखिँदैन। यद्यपि हामी अब जान्दछौं कि कथाहरू अन्त्य हुनुमा अझ जोडदार कारणहरू छन्। यस्तो देखिन्छ कि कथा मa्गामा जारी रहन्छ र यसले मलाई बढि अर्थ राख्यो जब मैले थाहा पाए।
HOTD लाई प्रशंसक र आलोचक प्रतिक्रिया उच्च थियो र यसलाई धेरै मानिसहरूले मन पराएका थिए। त्यसोभए यो सीजन २ वा स्पिन अफ मौसममा पनि फर्किन्छ? यो ब्लग पढ्न जारी राख्नुहोस्, किनकि हामीसँग कहानीको बारेमा छलफल गर्न धेरै नै छ र यदि केहि मौसम यदि उत्पादन गरिएको थियो भने। के यो पहिलो मौसम छोडेको ठाउँमा जारी रहन्छ, वा केहि समय पहिलो मौसमको घटनाहरू पछि हुने गर्दछ?
एचओटीडीको कहानी कम्तीमा पनि भन्न सजिलो छ, तर यसले जापानको एक ज़ोम्बी apocalypse समयमा जापानी हाईस्कूलका विद्यार्थीहरूको समूहको दृष्टिकोणलाई अनुसरण गर्दछ। हामी पहिलो एपिसोडमा मुख्य पात्रहरूसँग परिचित भएका छौं, र यद्यपि कथा समयमा समय-समयमा जम्प हुँदै जान्छ यसले मुख्य रूपमा एकल स्ट्रान कथा अनुसरण गर्दछ। यसले कथा प्रवाह गर्न अनुमति दिन्छ, जब कि धेरै जटिल हुँदैन। हामी पहिलो अंक देखि सम्पूर्ण देश संक्रमित नभएसम्मको प्रकोप देख्छौं। कुल अराजकताले लिन्छ र हामी नागरिकहरू एक अर्कामा परिवर्तन भएको देख्छौं किनकि राष्ट्रिय पुलिसले नागरिक अशान्ति रोक्न र सुरक्षाको संरक्षण गर्न प्रयास गरे पनि असफल। कथाले देखाउँदछ कि जापानका साधारण जिल्लाहरुमा सामान्य मानिसहरु बाँच्नको निम्ति एक अर्कालाई भेट्छन्, र यहा एनिमेसनको ग्राफिक प्रकृतिले एपिसोडलाई समात्दछ। हामी पनी परिवारहरूलाई उनीहरूको छिमेकीलाई फर्काउन को लागी हेरिरहेका छन जब उनीहरूलाई सहयोगको आवश्यक पर्दछ।
त्यहाँ लगभग 6- characters पात्रहरू छन् जससँग हामी परिचित छौं, र यो पछि becomes बन्छ जब समूह आकारमा बढ्छ किनकि उनीहरूले बाँचेकालाई भेट्छन्। तिनीहरू surv बाँचेकाहरूले बिभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्छन् जस्तै संक्रमितलाई हटाउने र प्राप्त हुने हतियारहरू र बाँच्नका लागि स्रोतहरू। यो टिप्पणी गरिएको छ कि समूह र कुनै पनि बाँचेकाहरूले सेना वा राष्ट्रिय पुलिसबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त गर्दैनन्। मेरो विचारमा यो अवास्तविक छ किनकि दोस्रो एपिसोडको बखत सैन्य र अन्य सरकारी निकायले के भइरहेको थियो भन्ने थाहा पाएपछि यो देश मार्शल कानुनमा राखिएको थियो। तथ्यमा यस प्रकारको अवस्थाको लागि धेरै सरकारहरूको योजना र प्रोटोकलहरू हुन्छन्।
कथाको अन्तमा हामी देख्छौं कि चरित्रहरू निजी सम्पत्तीमा भाग्दछन् जुन चार्टरहरू मध्ये एकको निवास (सहज रूपमा) हुन्छ। र यो (जहाँसम्म म यो सम्झन सक्दछु) जहाँ कहानी समाप्त हुन्छ। मेरो विचारमा, यो कथा न त निर्णायक थियो वा न निर्विवाद, र यसले मलाई अत्यन्त रीस उठायो। अन्तिम घटना हेर्दा म निराश र दु: खी महसुस गरें। यो मुख्यतया किनभने मैले सोचें कि उनीहरूले यस कथासँग यति धेरै गर्न सक्दछन् र त्यहाँ लेखिएको म written्गाको अधिक खण्डहरू भएकाले मैले मेरो टाउको लपेट्न सकिनँ कि कसरी यस कहानी यस्तै छोडियो। यद्यपि म यसबारे पछि छलफल गर्नेछु।
ताकाशी कोमुरो श्रृंखलाको मुख्य पात्र हुन् र उनी मुख्य समूहका नेताको रूपमा पनि काम गर्छन्। ऊ एकदम सामान्य छ र म उसको अधीनमा र उनको नेतृत्व कौशल को स्पष्ट वासना देखि अलग देखिरहेको थियो जब म वास्तव मा उनको बारे मा केहि विशेष छान्ने थिएन। उसको अवांछनीय स्वभावको बाबजुद ऊ आफूले के गरिरहेको छ थाहा पाउँदछ र उसले समूहमा सब भन्दा तार्किक हुनुको उद्देश्य पूरा गर्दछ। मैले बुझें कि ऊ सबैभन्दा बढी सम्बन्धित र मनपर्न सजिलो मानिन्छ तर म वास्तवमा उनीप्रति सहानुभूति देखाउन सकिन किनभने उसले आफ्नो सर्वश्रेष्ठ मित्रको प्राविधिक रूपमा हत्या गर्‍यो, त्यसपछि मृतक प्रेमिकाको साथ यौन सम्बन्ध राखियो।
अर्को रिया म्यामोटो छ जो ताकाशी जस्ता हाईस्कूलमा विद्यार्थी छ। उनी रोमान्टिक रूपमा टाकाशीको सबैभन्दा मिल्ने साथीसँग संलग्न छिन् जुन टाकिशीले पहिलो भागमा मारिएको थियो। पछिल्ला एपिसोडहरूमा, रई र ताकिशी रोमान्टिक रूपमा सम्बन्धित हुन्छन्, जुन मेरो विचारमा धेरै गड़बडिएको छ, तर हुनसक्छ त्यो मलाई मात्र हो। उनीसँग अचाक्ली प्रकृति छ र धेरै मनपराउँदैन। यद्यपि सबै पात्रहरू उही परिस्थितिबाट गुज्रिरहे पनि यो री हो जसले उनको भावनाहरू निरन्तर समूहको बाँकी भागमा र विशेष गरी ताकिशीमा अभिव्यक्त गर्दछ, उसलाई लैंगिक अग्रिमतामा पनि डो leading्याउँछ।
HOTD को संक्षेपमा अन्त गरिएको प्लॉट एकदम अपूर्ण छ, र यसले समूहहरूको यात्रामा रहेको एस्टेटको लागि केन्द्र बनाउँदछ जो निवासीहरू मध्येका एक पात्रका आमा-बुबा हुन् (सया ताकागी)। एसीटेन्टको नजीकको नजिक र नजिक आउने क्रममा, यो समूहले महसुस गर्यो कि एस्टेट सुरक्षित छैन। तिनीहरू पनि यस निष्कर्षमा पुगे कि जीवित रहनको लागि अझ राम्रो मौकाको लागि तिनीहरूले निवास छोड्नु पर्छ। जे सम्पत्ति आकार र बहु ​​सुरक्षा सुविधाहरू जस्तै फेन्स र क्यामेराहरू, तर जे भए पनि जुन पूर्ण रूपमा मूर्ख छ।
अन्तिम कथानकले देख्छ कि सबै मुख्य पात्रहरूले एस्टेट छोड्छन् र हामी देख्छौं कि सयाका अभिभावकहरूले आफुलाई बलिदान दिन समूहलाई समय र सम्पत्ती प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित राख्न समय दिनको लागि बलिदान गर्दछन्। फेरि यो कथाको अर्को अंश हो जुन धेरै मूर्ख र अवास्तविक छ। यो समूह सजीलो सआका आमाबुवा र अन्य व्यक्तिहरूसँग सजिलै छोडियो जुन उनीहरूको हो। र सयालाई मतलब छैन कि उसका आमा बुबा पछाडि मर्न छोड्नुहुनेछ तर यसको बारेमा कुरा नगरौं। र यो नै हो, हामीले तक्शीको समूह र कथाका अन्य पात्रहरूलाई के हुन्छ भनेर हामी हेर्न सक्दैनौं।
के त्यहाँ सीजन २ हुनेछ?
यो सुरक्षित छ भन्न को लागी सुरक्षित छ कि हाई स्कूल अफ द डेड दुबै प्रशंसकहरु र आलोचकहरु द्वारा राम्रो स्वागत थियो, र यो कथा जाँदै गरेको तरिका को कारण धेरै ध्यान प्राप्त गरेको देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूले सोचे कि एचओटीडी एक धेरै withतुहरूसँग लामो चलिरहेको एनिमेस हुनेछ, जस्तै अन्य जोम्बी सम्बन्धी टीभी श्रृंखलाहरू जस्तै हिड्न मृत। सीजन २ को लागि आशाहरू शृ popularity्खलाको लोकप्रियताको कारण प्रशंसकहरू बीच धेरै नै थिए। यद्यपि यो मूल लेखक र मa्गाको निर्माता डेसुक सातेको मृत्यु हुनुभन्दा अघि हो। दुःखको कुरा, डाईसुकेको २०१2मा मृत्यु भयो, हाईस्कूल अफ द डेडको पहिलो सत्र जारी भएको केही समय पछि। यो एक कारण हो जुन HOTD को एक सीजन 2017 गाह्रो हुन्छ। यो किनभने anime श्रृंखला लगभग सबै समय मas्गा बाट अनुकूलन गरीएको हो जुन तिनीहरुको सृष्टिकर्ताको द्वारा लेखिएको हो। तर यदि डेसुक सातेको मृत्यु भइसकेको छ भने, त्यसो भए पक्कै पनि असम्भव बनाउने मौसम2को उत्पादन गर्न सकिन्छ, यदि त्यहाँ एचओटीडीको एनिमेस एडाप्टसनको लागि उत्पादन कम्पनीको लागि सामग्री छैन भने?
ठिक छ, यो सत्य हो कि डेसुक दोस्रो मौसमको लागि दोस्रो म writing्गा लेखेर आधा बाटोमा मरे। यो ज्यादै निराशाजनक छ, तर यो अवस्था हो, र हामीले यो बुझ्नुपर्दछ कि यो बिन्दुमा सिजन २ पनि सम्भव छ कि छैन भनेर। यद्यपि यो दुर्लभ छ कि अर्को लेखकले डेसुकबाट कथा किन्न सक्छ किनभने उसले डेसुकबाट अधिकार किन्नुपर्दछ, यो फरक हुन सक्छ जुन उनी अहिले मरेका छन्। के भनिरहेका थिए कि अर्को लेखक जो हुन सक्छ कि कुनै तरिकामा डेसुकसँग जडित छन् मंगा जारी राख्न सक्थे र जहाँ उसले छोडेको थियो। यदि डेशुके हैन भने, तब कोही (अर्को म writer्गा लेखक) ले कथा लिन सक्थे जहाँबाट दाइसुकेले दुर्भाग्यवस यसलाई छोडेका थिए।
राम्रो समाचार यो हो कि यो पूर्ण रूपमा असम्भव छैन कि अर्को स्टुडियोले यस श्रृंखलाको लागि उत्पादन भूमिका लिन सक्दछ। यहाँ मुद्दा वास्तविक कथाको अधिकार हो, जुन विशेष रूपमा लाईसेन्स दिइएको थियो जेनोन विश्वव्यापी मनोरन्जन anime को उत्पादन को लागी। यद्यपि, अब डेसुकको मृत्यु भएको छ, यो परिवर्तन हुन सक्छ। शृंखलाको लोकप्रियता दिँदा हामी यो सधैका लागि जान दु: खी हुनेछौं, र हालसालैका घटनाहरू दिइएमा यो के हुने छ सम्भावना छ। यो भनेको होइन कि सीजन २ सम्भव छैन, तर यदि मौसम be हुनुपर्ने हो भने हामी निश्चित रूपमा भन्न सक्छौं कि यो इजाजतपत्र र डेसुकको मृत्युको कारणले पूर्ण हुन धेरै समय लाग्नेछ। । केहि तर्क गर्न सक्छन् कि Daisuke HOTD समाप्त भएको चाहान्छ तर अब हामी थाहा छैन।
कहिले मौसम2एयर?
परिस्थिति दिंदा हामी भन्छौ कि एक मौसम २ राम्रो सम्भावना हो, तर अनिश्चित छैन। हामी भन्न सक्दछौं कि यदि डेसुकको दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु भएको थिएन भने, एक मौसम २ निश्चित हुनेछ। अब यो एक मौसम2मान्न को लागी धेरै हुनेछ अब तान छैन? हामी सोच्दछौं कि पहिलो सीजन उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसको सफलता दिएपछि यसलाई अघि बढाउन चाहान्छ? केही तर्क गर्दछन् कि HOTD को कुनै पनि बढि उत्पादन वा अनुकूलन डेइस्कलाई अनादर गर्ने छ। यसको काउन्टर तर्क यो हो कि सीजन २ डाईसुकेले चाहेको हुन सक्छ।
जहाँसम्म, हामीले अघिल्लो ब्लग पोष्टहरूमा उल्लेख गरिसकेका छौं, एनिमेस उद्योग एक अप्रत्याशित हो। कहिलेकाँही हामी शृ for्खलाका लागि नयाँ सत्रहरू पाउँछौं जुन कसैले चाहँदैन, उदाहरणका लागि SNAFU, र कहिलेकाँही हामी नयाँ सीजनहरू पाउँछौं जुन हामी प्रेम गर्छौं। अहिलेको लागि हामीले कुर्नु पर्छ, यद्यपि तपाई डेइसुकेको दुखद मृत्यु लिन सक्नुहुन्छ जुन यो हो।
तपाईं डेडको हाई स्कूलको बारेमा के हुन्छ भन्ने बारे आफ्नो निष्कर्ष कोर्न सक्नुहुन्छ, यो ब्लग पोष्ट तपाईंलाई सूचित गर्न मात्र हो। हामी आशा गर्दछौं कि यो ब्लग, हाम्रो अन्य अरू जस्तै, तपाईंलाई सूचित गर्नमा यो प्रभावकारी भएको थियो। हामी यस जस्तो बढी सामग्री पोष्ट गर्ने लक्ष्य राख्दै छौं। यदि तपाईं हामीलाई मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया यो ब्लग मनपराउँनुहोस्, र यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने यसलाई साझा गर्नुहोस्। तपाईले सदस्यता लिन पनि सक्नुहुन्छ ताकि तपाईले तपाईलाई इ-मेल गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक पटक हामी नयाँ ब्लग पोस्ट गरेपछि।
यो एनिमको लागि समग्र रेटिंग:
तपाइँले यहाँ हाम्रो युट्यूब च्यानलको सदस्यता लिन सक्नुहुन्छ: https://www.youtube.com/channel/UCRYkAdQhzg2HYxWoZrKmgdw?view_as=subscriber
पढ्नका लागि धेरै धेरै धन्यबाद, हामी तपाईलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छौं।
टैग: एनिमे एनिमेसन सिजन एनिमेसन २ हाईस्कूलको मृतक हाईस्कूलको डेडसिजन 2
अघिल्लो प्रविष्टि तपाईंले उठाउनुभएको डम्बेलहरू कत्तिको भारी छन्? - सिजन २ प्रिमियर मिति + विचारहरू
अर्को प्रविष्टि के अमागी ब्रिलियन्ट पार्क वर्थ हेरिरहेका छन्?